कसरि काम्यो यतिका बेर सम्म यो फुच्चे? भिडियो हेर्नुस्। - Enepalese.com
कसरि काम्यो यतिका बेर सम्म यो फुच्चे? भिडियो हेर्नुस्।
इनेप्लिज २०७४ माघ २२ गते २३:४३ मा प्रकाशित
यति बेला काठ्मण्डौको एउटा घरमा घटेको अदृस्य घटनाले सामाजिक संजाल तत्तिएको छ।
कोहि तान्त्रिक शक्ति भनि रहेका छन् त कोहि भुतप्रेत वा दुखि आत्मा रहेको अड्कलबाजी गरि रहेका छन्।
यो बिषयले त्यतिबेला तत्तियो जब घटनालाई लोकप्रिय कार्यक्रम सिधा कुरा जनता संगका संचालक रवि लामिछानेले नियाल्न थाल्यो। यस्ता अदृश्य शक्तिका बारेमा आफुले पनि कहिल्यै बिश्वास नगरेको रवि लामिछाने बताउछन तर आफै ति कुरा संग डर लागेको भने पछि संजाल झनै तात्तिएको छ।
के साँचै भूतप्रेत हुन्छन त?
के साँचै आत्मा भड्किएर सान्त संग बसी रहेको घर समाजमा दुख दिन आउछन त?
यस्तै यस्तै डरलाग्दा प्रश्नहरु धेरैको मनमा उब्जिएको छ।
यसै सन्धर्भमा हामीले देखाउन लागेको यो भिडीयो हेर्नुहोस्। गुरुङ्ग समुदायमा सदियौं प्रचलित अर्घौको यो दृश्य।
मान्छे मरे पछि पितृ उद्धारका लागि भनि जसरि ब्राम्हण समुदायले श्राद्ये गर्छ त्यस्तै गुरुङ समुदायले अर्घौ गरिने प्रचलन छ।
हेर्नुहोस् अर्घौं गर्दाको यो दृश्य भिडियोमा।